'1984' Wuxuu Noqon Doonaa AHS Xilligi Ugu Gaabanaa Abid - iHorror
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh '1984' Wuxuu Noqon Doonaa AHS Xilligi Ugu Gaabanaa Abid
'1984' Wuxuu Noqon Doonaa AHS Xilligi Ugu Gaabanaa Abid
Qaarkood way jeclaan karaan, qaarna ma jeclaan karaan, laakiin AHS: 1984 waxay lahaan doontaa xilli ciyaareedkeeda dhamaadka bisha Nofeembar 14, taas oo ka dhigaysa xilli ugu gaaban taxanaha illaa iyo hadda.
1984 waa fikradda la yaab leh tan Roanoke, qaar xitaa waxay soo jeedinayaan qalloocinta sanadkaan in waxa oo dhan runti ay yihiin filim VHS ah.
Hadda xillikeedii sagaalaad, 1984 wuxuu ku bilaabmayaa sidii dib-u-celin loogu talagalay dadka wax u dhimaya sannadihii ugu dambeeyay, oo aan midna ahayn, laakiin laba gacan ku dhiiglayaashu waxay dabagalayaan lataliyayaasha xerada iyagoo ku dhexjiray keyn duug ah oo horay looga tagay kaas oo loo qorsheeyay in dib loogu furo caruurta maalinta ku xigta.
Sida laga filayo joornaalada kuleylka ah, lataliyeyaasha ayaa midba mid looga qaadaa siyaabo kala duwan, mid walbana wuxuu leeyahay dhiig intii macquul ah.
Taageerayaasha waa loo kala qeybsamay maxaa yeelay sida wax soo saarka ugu badan ee Murphy, waxyaabo had iyo jeer maahan sida ay umuuqdaan waxayna noqoneysaa mid aan cadeyn kuwa dhabta ah ee dilalka ay yihiin, iyagoo taxanaha u kala dhigaya dhamaan noocyada jihooyinka.
Iyada oo ay gaaban tahay, daawadayaasha doonaya jawaabaha waxay kaliya sugi doonaan dhowr toddobaad oo dheeri ah.
Marka la barbardhigo, Guriga Dilka lahaa 12 qaybood, Asylum lahaa 13 qaybood, Coven lahaa 13 qaybood, Freakshow lahaa 13 qaybood, Hotel lahaa 12 qaybood, Roanoke lahaa 10 qaybood, Wadaad lahaa 11 qaybood, iyo apocalypse lahaa 10 qaybood.
In kasta oo ciyaartooyada waaweyn qaarkood ka maqan yihiin xilligan: Kathy Bates, Sarah Paulson, Lady Gaga, waxay dadka kale siisaa fursad ay kaga soo dhalaalaan booskooda. Ogeysiis gaar ah waa inuu aadaa Gus Kenworthy iyo Booska Angelica Ross.
Sheekada Naxdinta leh ee Mareykanka waxay soo baxdaa Khamiista 10ka fiidnimo ee FOX. Guji halkan wixii faahfaahin dheeraad ah.
AHS: 1984Story naxdin baa AmericanRyan MurphyTimothy Rawles
Lupita Nyong'o waxay dib u eegis ku sameysaa astaamihii 'US' oo waxay ka cabsataa 'Heck out of' Halloween Night Night '
Hubi Trailer-ka La-qabsashada Netflix ee 'Witcher'